နယူးကို လူမရောင်းမယ့် EPL ကလပ်များ ၊ ရှယ်ယာတွေ ထုတ်ရောင်းတဲ့ ဝက်စ်ဟမ်း ၊ စီးတီး မှာ ဆက်နေမယ့် တောင်ပံလူတို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
နယူးကို လူမရောင်းမယ့် EPL ကလပ်များ ၊ ရှယ်ယာတွေ ထုတ်ရောင်းတဲ့ ဝက်စ်ဟမ်း ၊ စီးတီး မှာ ဆက်နေမယ့် တောင်ပံလူတို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
November 11, 2021 - by Editor
အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ် ဝက်စ်ဟမ်း အသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ရှယ်ယာ ၂၇% ကို ချက် ရီပတ်ဘလစ် ဘီလီယံနာ ဒန်နီရယ် ကရီတင်စကီး ထံ ရောင်းချ လိုက်တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရိုင်ရယ်မေးလ် နဲ့ စိန်းစ်ဘာရီ အဖွဲ့အစည်း ဟာ သူတို့ရဲ့ ရှယ်ယာ ၂၇% ကို ကရီတင်စကီး ထံ ရောင်းထုတ် ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကရီတင်စကီး ဟာ ဝက်စ်ဟမ်း အသင်းကို အနာဂါတ်မှာ အပြည့်အ၀ ထိန်းချုပ် နိုင်ဖို့ အတွက် အစီအစဉ် ရှိသူ ဖြစ်ပြီး အခုလို ရှယ်ယာတွေ ပိုင်ဆိုင် လာတာဟာ ဝက်စ်ဟမ်း ပရိသတ် မနှစ်သက်တဲ့ ဒေးဗစ် ဆူလီဗန် နဲ့ ဒေးဗစ် ဂိုးလ် တို့ရဲ့ ကြီးစိုးမှုကို အဆုံးသတ်ဖို့ အစပြုလာတာ ဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်မှုတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဝက်စ်ဟမ်း ဟာ သူတို့ အသင်းကို ပိုမို အင်အားကြီးမားလာပြီး ချန်ပီယံ ဆုဖလားတွေကို စိန်ခေါ် နိုင်မယ့် အဆင့်ကို ရောက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့် ထားတာကြောင့် အမာခံ ကွင်းလယ် ကစားသမား ဒီကလန် ရိုက်စ် ကို ပေါင် သန်း ၁၀၀ နဲ့ ကမ်းလှမ်း စေကာမူ ရောင်းထုတ် မသွားဖို့ စဉ်းစားနေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ် ။
အသင်းလက်မဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ဘရာဇီး ဝါရင့် နောက်ခံလူ ဒါနီ အဲလ်ဗက်စ် ဟာ အသင်းဟောင်း ဘာစီလိုနာ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေ နဲ့ ယခု အပတ် အတွင်းမှာ တွေ့ဆုံဖွယ် ရှိတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
အဲလ်ဗက် ဟာ ဇာဗီ နည်းပြ အဖြစ် ကိုင်တွယ်တော့မယ့် ဘာစီလိုနာ မှာ ပြန်ကစားဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
အင်တာမီလန် ဟာ အိုင်ယက်စ် ဂိုးသမား အိုနာနာ ကို ဇန်နဝါရီမှာ အစောတလျှင် ခေါ်ယူဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘဲ မူလစီစဉ် ထားတဲ့ အတိုင်း အိုနာနာ နဲ့ အိုင်ယက်စ် တို့ စာချုပ် ကုန်ဆုံးမယ့် ၂၀၂၂ မှသာ အလွတ် နဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ ကြိုးစား သွားမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ စီးတီး တောင်ပံ ကစားသမား မာရက်ဇ် ဟာ ဇန်နဝါရီ မှာ အသင်းကနေ ထွက်ခွာဖို့ စိတ်ကူး မရှိ သေးဘူးလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
နာပိုလီ တိုက်စစ်မှူး လော်ရန်ဇို အင်ဆစ်ညာ ရဲ့ အေးဂျင့် ကတော့ သူ့ရဲ့ ကစားသမားဟာ နာပိုလီ က ကမ်းလှမ်း ထားတဲ့ လုပ်ခ ၅၀% လျော့ယူရမယ့် စာချုပ်သစ် အပေါ် အံ့အားသင့် ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
နာပိုလီ နဲ့ အင်ဆစ်ညာ တို့ရဲ့ စာချုပ်ဟာ ၂၀၂၂ ဇွန်လ မှာ သက်တမ်း ကုန်ဆုံး မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် အင်ဆစ်ညာ နဲ့ အမေရိကန် လိဂ် တို့ရဲ့ သတင်းတွေဟာလည်း မဟုတ်မှန်ကြောင်း အေးဂျင့်က ဖွင့်ဟ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန်မြုးနစ် အသင်းဟာ ဝက်စ်ဘရွန်း အသင်းရဲ့ ယူ-၂၃ ကစားသမားလေး ရီရက်စ် ကလယ်ရီ ကို ခေါ်ယူဖို့ ဆွေးနွေး နေပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန် ဟာ အသက် ၁၇ နှစ်တည်းနဲ့ ယူ-၂၃ အသင်းမှာ ဝင်ကစားနေတဲ့ ကလယ်ရီ ရဲ့ ခြေစွမ်းကို အင်္ဂလန် အထိ ကင်းထောက်တွေ စေလွှတ်ကာ စောင့်ကြည့်ထားပြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
နာမည်ကျော် အေးဂျင့် ဂျော့ မန်ဒက်စ် ဟာ ဖူလ်ဟမ် ရဲ့ အင်္ဂလန် ယူ-၁၈ ကစားသမားလေး ဖာဘီယို ကာဗယ်လ်ဟို ကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် နိုင်ဖို့ ကြိုးစား နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ကာဗယ်လ်ဟို ကို လီဗာပူးက စိတ်ဝင်စား နေပြီး ဘာစီလိုနာ နဲ့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် တို့ကလည်း ကြိုးပမ်း ခဲ့ဖူးတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဆော်ဒီ ဘီလီယံနာ အိမ်ရှေ့မင်းသား ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း ရဲ့ ငွေကြေး လှိုင်းလုံးတွေနဲ့ ပါဝင် လာမှုဟာ အပြောင်းအရွှေ့ ဈေးကွက် ကို ကြီးစွာ သက်ရောက် စေနိုင်တာကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်းတွေဟာ ဇန်နဝါရီ မှာ နယူးကာဆယ် အသင်းထံ ကစားသမားတွေ ရောင်းမထုတ် သွားဖို့ ဆိုတဲ့ အစီအစဉ် ကို သဘောတူဖွယ် ရှိနေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အီတလီ စီးရီးအေ ကလပ် ယူဗင်တပ် ဟာ ဖီအိုရင်တီးနား တိုက်စစ်မှူး ဒူဆန် ဗလာဟိုဗစ် ကို ရာသီအကုန် မှာ ခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင် ထားပြီး မအောင်မြင် ခဲ့ပါက ဒုတိယ အစီအစဉ် အဖြစ် မန်ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူး အန်တိုနီ မာရှယ် ကို ပြောင်းလဲ ပစ်မှတ် ထားသွားမယ်လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဆီဗီးလား အသင်းဟာ ဥရောပ ထိပ်သီး ကလပ်တွေက လာမယ့် ဇန်နဝါရီ မှာ သူတို့ရဲ့ ပြင်သစ် နောက်ခံလူ ဂျူးလ် ကွန်ဒီ ကို စာချုပ် ဖျက်သိမ်းကြေး ( ပေါင် ၆၉ သန်း ) ပေးချေကာ ခေါ်ယူ သွားကြမှာကို စိုးရိမ် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အီရတ် လက်ရွေးစင် ဘောလုံး အသင်းဟာ အင်္ဂလန် အသင်းကြီးမှာ ကစားရခြင်း မရှိသေးတဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် လူငယ်လေး ဇီဒန်း အစ်ဘယ်လ် ကို လက်ဦးမှု ရယူကာ စီနီယာ လက်ရွေးစင် အခွင့်အရေး ကမ်းလှမ်းဖို့ စဉ်းစား နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး နည်းပြသစ် အန်တိုနီယို ကွန်တီ ဟာ အသင်းသားတွေ ထဲမှာ ဝိတ်တက် နေသူတွေ ရှိနေတယ်လို့ မှတ်ချက် ပြုခဲ့ပြီး အသင်းရဲ့ စားသောက်ပွဲတွေ မှာ မယိုးနိစ် နဲ့ အချဉ်ရည်တွေ အသုံးပြုမှု ကို စတင် ပိတ်ပင် လိုက်တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ပီအက်စ်ဂျီမှာ အနာဂတ် မသေချာနေတဲ့ နေမာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချဲလ်ဆီး အသင်းထံ မက်ဆေ့ခ်ျ ပေးလိုက်တဲ့ ဂက်စ်ပိုယက်
Previous Article နေရာပြိုင်ဘက် အသင်းဖော်ကို လူငှားရိုက်ခိုင်း ခဲ့တယ်လို့ ယူဆပြီး ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ PSG အသင်းသူတဦး
Next Article Ballon D’Or ဆန်ခါတင် စာရင်းမှာ မပါဝင်ခဲ့လို့ ဒေါသမထွက်ခဲ့သလို ၊ သဘောထား ကြီးကြောင်း ပြသခဲ့တဲ့ အက်ဒိုဝါ့ဒ် မန်ဒီ